Degmooyinka ladan oo qaxooti yar qaabbila - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Degmooyinka ladan oo qaxooti yar qaabbila
La daabacay måndag 1 juli 2013 kl 10.09
Sawirle: Malin Rimfors/Sveriges Radio
Daraasad uu sameeyey wargeyska Svenska Dagbladet waxaa lagu miijiyey in shanta degmo oo dalka ugu fakhrisan ay qaataan qaxooti shan jeer ka badan qaxootiga ay qaataan degmooyinka dhaqalahoodu wanaagsan yahay.
Waxaa halkaa lagu muujiyey in degmooyinka uu ka taliyo xisbiga Mooderaatku ay qaataan qaxooyiga ugu yar. Degmooyinka dhaqaalaha wanaagsan oo qaata qaxootiga ugu yar waxaa ka mid ah Vellinge oo ku taal bannaanka Malmö, iyo degmooyinka Lidingö och Danderyd oo ku yaal duleedka Stockholm. Dhammaan degmooyinkaasna waxaa ka taliya xisbiga Mooderaatka.
- Run ahaantii waa wax laga caroodo in ay degmooyinka hodanka ahi qaataan qaxooti ka yar qaxootiga ay qaataan degmooyinka kale. Waxaana muhiim ah in dhammaan laga qaybqaato hab la isku kaalmeeyo oo cid waliba mas’uuliyad qaado. Sidaasna waxaa wargeyska Svenska Dagbladet u sheegay wasiirka ishdexgalka Erik Ullenhag.
Wargeyska SvD wuxuu baaritaan ku sameeyey habka ay 290 degmo ee dalka ku yaal ay u qaabbilayeen shantii sano ee ugu dambeysey dadka qaxootiga ah ee dalka soo gala, iyo sida ay qaabbilaadda qaxootigu lug ugu lahayd hodanimada degmooyinka. Hodanimada degmooyinka lagu cabbiraa dakhliga dadka ku nool oo canshuurta bixiya.